3d Cury Kucingo olubiyele, 358 Ukhuseleko Fence, Chain Link Fence - Yeson
3D Cury Kucingo olubiyele
Abababulala Iron Kucingo olubiyele
358 Ukhuseleko Kucingo olubiyele
Double Wire Kucingo olubiyele
Isihlwele Control Kucingo olubiyele
Anping Yeson ise odumileyo wocingo Town of China- Anping. Siye wendele kwimveliso wocingo ekumgangatho ophezulu ukusuka ekuqaleni. Nophuhliso fast, siba ngokomelela kakhulu ngakumbi, yaye siye kumisa amasebe eziliqela iimveliso ezahlukeneyo. iimveliso zethu iquka: iingcingo welding njengonombombiya, welding mesh panel, nokubethelela welding mesh panel, umnatha eyandisiweyo, isikwere locingo, ucingo ezinamacala njengonombombiya, gabion njengonombombiya, ucingo link ityathanga, aluminiyam wire isefu, wire steel stainless nenethi, ucingo intsimbi, nocingo oluhlabayo, kunye olunameva etc .. iimveliso zethu ziye ngaphandle USA, Italy, eRashiya, Australia, Mid-East, Afrika, kunye noMzantsi East Asia.
Yasekwa ngonyaka ka-1990
kwizikhundla zemveliso, ngaphezulu kwe 10
NGAPHEZU 100 IZIGIDI
20 + iimveliso, yekani-One lokuthenga
ucingo link chain PVC
chain link ukubiya abamnyama
ucingo link chain kwalenza
kocingo link chain
V mesh Kucingo olubiyele
segesi uthango okwethutyana
Chain link olubiyele okwethutyana
© Copyright - 2010-2022 : All Rights Reserved. Hot Products - eKhaya - AMP Mobile
868 kabini Wire Fence , Steel udonga olubiyele, 358 Ukhuseleko Kucingo olubiyele, yangaphandle seThutyana olubiyele , udonga olubiyele, Chain Link seThutyana olubiyele ,